Ha iibin macluumaadkayga gaarka ah | Dukaanka Madaxa ee Dragons
Bogga ugu weyn → Ha iibiin macluumaadkeyga shaqsiyadeed
Ha iibiin macluumaadkeyga shaqsiyadeed
Xuquuqdaada hoos timaada Xeerka Qarsoodiga Macmiilka California
Xeerka Qarsoodiga Macmiilka California (CCPA) wuxuu ku siinayaa xuquuq ku saabsan sida xogtaada ama macluumaadkaaga shakhsiyeed loola dhaqmo. Sida uu dhigayo sharciga, dadka deggan California waxay dooran karaan inay ka baxaan “iibinta” xogtooda gaarka ah dhinac saddexaad. Iyada oo ku saleysan qeexitaanka CCPA, “iibin” waxaa loola jeedaa xog ururinta ujeeddada abuuritaanka xayeeysiinta iyo isgaarsiinta kale. Baro wax badan oo ku saabsan CCPA iyo xuquuqdaada asturnaanta.
Sida looga baxo
Adigoo gujinaya xiriirka hoose, annagu mar dambe ma urursan doonno ama iibinayno macluumaadkaaga shaqsiyeed. Tani waxay quseysaa labada dhinac ee saddexaad iyo xogta aan aruurineyno si ay gacan uga geysato shaqsiyeynta khibradaada mareegahayada ama isgaarsiinta kale. Macluumaad dheeri ah, arag siyaasadeena asturnaanta.